Wararkii ugu dambeeyay murankii ka jiray Garoonka Aadan-Cadde - Awdinle Online
Wararkii ugu dambeeyay murankii ka jiray Garoonka Aadan-Cadde
Waxaa Goordhow xal buux laga gaaray muran ka taagnaa shaqada duulimaadyadii gudaha ee ka bixi jiray Garoonka Aadan Cadde, kadib markii ay gadood sameeyeen Shirkadaha duullimaadyada ee aada Gobolada dalka.
Warar kalsoonaan karo oo la helaya ayaa sheegaya in hakadkii saakay ku yimid shaqadii Garoonka ay soo fara-geliyeen Maamulka Garoonka iyo Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Federaalka, isla markaana haatan la xaqliyay murankii taagnaa.
Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa shalay joojisay diyaarad aadi laheyd Magaalada Doolow ee Gobolka Gedo, taasina ay keentay in Guddiga ay ku mideysan yihii shirkadaha diyaaradaha ay sameeyaan shaqo joojin.
Dad ku sugan Garoonka Aadan Cadde ayaa Dalsan u sheegay in dad badan oo rakaab ah, isla markaana kusii jeeday Gobolada dalka ay xirnaayeen gudaha Garoonka inta uu taagnaa muran, balse haatan u baxayaan hadii ay u socdeen.
Previous articleSoomaaliya iyo Norwey oo ka wada hadlay Arrimo muhiim ah
Next articleHir-Shabeelle & dowladda Britain oo ka wada hadlay Arrimaha doorashooyinka